Bulshada rayidka ah iyo Baarlamanka Puntland oo odoyaasha qabaa’ilka u jeediyay in aysan garab-siin kiisaska ka dhanka ah dumarka – Kalfadhi
Ururada bulshada rayidka ah ee Puntland ayaa war ka soo saaray falka dilka iyo kufsiga ah ee Galkacyo loogu geystay Caasho Ilyaas oo 12 jir ah, gabadhaas oo shalay subax meydkeeda la soo dhigay meel ku dhow gurigooda, kadib in ka badan 20 saac oo la la’aa.
PUNSAA waxay si adag u cambaaraysay falka dhacay iyo ciddii geysatay oo ay ku baaqeen in sharciga la horkeeno.
Odoyaasha dhaqanka ayay ugu baaqeen in ay faraha kala baxaan kiisaska la xiriira tacadiyada ka dhanka ah haweenka, taas bedelkeedana waxay ku taliyeen in hay’adaha garsoorku ay awood buuxda u yeeshaan go’aan ka gaarista falalkaas.
Goor hore oo maanta ah xildhibaano u hadlay baarlamanka Puntland waxay uga digeen qabaa’ilka in aysan isku deyin in ay difaacaan falka noocaan ah.
Bulshada rayidka ahi waxay dowladda Puntland ugu baaqeen in ay awoodsiiso dhaqangelinta xeerka kufsiga, iyadoo lagu salaynayo waxa uu sharciga islaamku qabo.
“Waa in ay dowladdu fulisaa talaabo adagna ka qaadaa cid kastoo ku xadgudubta sharafta iyo xuquuqda dumarka” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka PUNSAA
Wararka ay Kalfadhi ka helayso kiiska dilka iyo kufsiga ah ee lagula kacay Caasho Ilyaas ayaa sheegaya in ilaa saaka dad badan oo la tuhunsan yahay loo xir-xray, kuwaas oo qaarkood laga qabtay Garowe. Ciidamo isugu jira boolis iyo nabadsugid ayaa gacan ka geysanaya baarista oo ay sidoo kale qayb ka yihiin xafiiska baarrintaanada Sayniska iyo xafiiska difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland.